Fametrahana - Nanjing Karlter Decoration Material Co., Ltd.
Torolàlana momba ny fametrahana plastika vita amin'ny vinyl Luxury
Azafady mba vakio tsara ny torolalana rehetra alohan'ny hanombohanao. Ny fametrahana tsy mety dia hanafoana ny fiantohana.
Zahao ireo takelaka raha misy lesoka toy ny loko, ny tsy fitovizany na ny chips alohan'ny fametrahana azy. Hamarino raha madio sy tsy misy fako ny fantsona. Tsy tokony ampiasaina ny takelaka misy kilema.
Ny haben'ny efitrano / fihazakazahana farany ambony dia 40x40 metatra (12x12 metatra).
Rehefa mampiasa takelaka avy amin'ny fonosana mihoatra ny iray dia zahao raha mifanaraka tsara amin'ny loko sy ny lamina alohan'ny hanombohanao. Mandritra ny fametrahana azy dia afangaroy ireo takelaka mifanila isaky ny boaty manerana ny gorodona.
Esory ny bobongolo baseboard raha azo atao. Raha sarotra esorina izy ireo dia ajanona eo amin'ny toerany. Ny famolavolana quart boribory dia asaina manarona ny habaka eo amin'ny gorodona sy ny baoritra.
Fanomanana ny gorodona
Raha te hanana fametrahana tsara, dia tokony hadio, maina, mafy ary mitovy ny haavon'ny gorodona rehetra. Esory ny staples sy ny lakaola karipetra alohan'ny hametrahana azy.
Mba hijerena ny fitoviana dia manorata fantsika ao afovoan'ny gorodona. Afatory amin'ny fantsika ny kofehy ary atosiho amin'ny tany ny fatotra. Hisintona mafy ny kofehy mankamin'ny zoro lavitra indrindra amin'ny efitrano ary diniho ny gorodona amin'ny haavon'ny masonao raha misy banga eo anelanelan'ny kofehy sy ny gorodona. Afindrao manodidina ny faritra manodidina ny efitrano ny kofehy manamarika ireo banga lehibe kokoa noho ny 3/16 ''. Ny tsy fitovian'ny gorodona mihoatra ny 3/16 '' isaky ny 10 metatra dia tsy maintsy ampidinina na hofenoina mpameno azy.
Aza apetraka ambonin'izay misy olan'ny hamandoana. Ny beton vaovao dia mila fanasitranana mandritra ny 60 andro farafahakeliny alohan'ny hametrahana.
Ho an'ny vokatra tsara indrindra, ny mari-pana dia tokony ho 50 ° - 95 ° F.
Ny sakan'ny zana-kazo voalohany dia tokony hitovy halehibe amin'ny laharana farany. Refesina eraky ny efitrano ary zarao amin'ny sakan'ny plank hahitanao hoe firy ny hazo fisaka feno hataony ary inona ny sakany ilaina amin'ny laharana farany. Raha tadiavina dia tapaho ny zana-kazo voalohany amin'ny sakan'ny fohy kokoa mba ho simetrika kokoa amin'ny laharana farany.
Mba hahazoana antoka fa ny haingon-trano ambonin'ny PVC dia eo ambanin'ny fefy vita rehefa apetraka, esory ny lela amin'ny lafiny lava amin'ny takelaka ho an'ny lafiny izay mikasika ny rindrina. Mampiasà antsy antsy amin'ny alàlan'ny lela imbetsaka mandra-pikatony mora foana. (Sary 1)
Atombohy amin'ny zoro iray amin'ny fametrahana ny tontonana voalohany miaraka amin'ny sisiny voapaika manatrika ny rindrina. (Sary 2)
Mba hametahana ny tontonana faharoa eo amin'ny rindrina, ampidino ary hidio ny lela faran'ny tontonana faharoa ao anaty lalan-dranon'ilay tontonana voalohany. Milahatra tsara ny sisiny. Ireo takelaka dia tokony ho fisaka amin'ny gorodona. (Sary 3)
Tohizo ny fampifandraisana ny laharana voalohany mandra-pahatonganao amin'ny tontonana feno farany. Ahodino ny tontonana farany 180 ° miaraka amin'ny lafiny lamina miakatra. Apetraho eo akaikin'ny andalana izy ary ataovy amin'ny toerana ivoahan'ny tontonana feno farany. Mampiasà antsy maranitra ampiasaina mba hamonoana ny plank, ilay snap manaraka ny tsipika isa ho an'ny voadidy madio. Apetaho araka ny voalaza etsy ambony. (Sary 4)
Atombohy ny andalana manaraka amin'ny sisan-javatra sisa amin'ny tsipika teo aloha mba hampitsaharana ny lamina. Ny sombin-javatra dia tokony ho 16 farafahakeliny. ". (Sary 5)
Mba hanombohana ny laharana faharoa dia ahodiho eo amin'ny 35 ° ny tontonana ary atorohy ny ilany amin'ny lafiny lava amin'ilay tontonana mankamin'ny lalan'ny sisin'ny tontonana voalohany indrindra. Rehefa aondrana dia hiditra eo amin'ny toerany ny plank. (Sary 6)
Araho ireto torolàlana ireto ihany amin'ny takelaka manaraka, apetaho aloha ny lafiny lava amin'ny alàlan'ny fametahana 35 ° ary atosika araka izay azo atao ny laharana teo amin'ilay andalana teo aloha. Hamarino tsara fa milahatra ny sisiny. Ampidinina amin'ny gorodona ny tontonana, afatory ny lela farany amin'ny lalan'ny faran'ny tontonana voalohany. Tohizo ny fametrahana lamina sisa amin'ity fomba ity. (Sary 7)
Mba hifanaraka amin'ny laharana farany, apetraho mivantana eo an-tampon'ny andalana teo aloha ireo zana-kazo izay mitazona ny lela hitovy amin'ny an'ny zana-kazo napetraka. Mametraha takelaka hafa mivadika amin'ny rindrina hampiasaina ho mpitari-dalana. Manorata tsipika iray amin'ireo hazo fisaka. Hetezo ny tontonana ary apetaho amin'ny toerany. (Sary 8)
Hetezo ny vata varavarana sy ny vavahady fanafanana, alao aloha araka ny marina ny halavany. Avy eo apetraho eo akaikin'ny toerana misy azy ny takelaka tapaka ary ampiasao ny mpanapaka handrefesana ireo faritra hovonoina. Mariho ny tontonana ary esory ireo teboka voamarika.
Hetezo ny zana-baravarana amin'ny alàlan'ny fanodinana ny tontonana mivadika ary amin'ny alàlan'ny tànana handavana ny haavony ilaina mba hahafahan'ny solo-panel hikorisa mora foana ao ambanin'ny zana-kazo.